मानवतस्करी रोक्ने ऐजेन्डामा एनआरएनए किन मौन ?
मित्र लाल पार्दे, पानी अभियानकर्ता, पोल्यान्ड
नेपालबाट बिदेश भन्दै मरिहत्ते गर्ने । कानुन अनुसार कुनै पनि संयन्त्रले काम नगर्ने । सरकारले न त समस्या समाधान गर्ने, उहीँ भोट माग्ने भाँडो मात्र बनाइरहने नौटन्की फ्री भिजाको रटान लगाइरहने बिदेश आउने समस्या बारे किन मौन छन् कथित सामाजिक संघ संस्थाहरु ?
विदेशको वास्तविक नियम अनि यथार्थ जानकारी किन दिन खोज्दैनन ? ७२ देशमा शाखा बिस्तार गरेको कुन एन आर एन नेताले अनुराधा कोइराला जस्तो रिस्क लिएर कुन एन आर एन नेताकै गैरकानुनी कामको बिरुद्धमा आवाज उठाउन सके ? किन कानुन मान्ने व्यक्तिहरु आज हरेक देशमा डिप्रेसनको सिकार भैरहेका छन् ? किन मानव भ्रष्टहरुको मात्र आवाज बलियो भएको छ ? यतिबला अनि सरकार किन चुप छ ? सरकारको बिरुद्धमा बोल्नेलाई जेल हाल्ने सरकारले किन मानव भ्रष्टहरुलाई पुरस्कार दिइरहन्छ ! शुरूवातमा गार्हो होला तर, नेपाली समाज मानव भ्रष्टबिरुद्ध किन एक हुन सक्दैन ? फेरि सत्य कुरा गर्नेहरुलाई किन प्रताडित बनाइन्छ ?